वडाध्यक्षको कुकर्म ! आफै अध्यक्ष रहेको विद्यालयमा पढ्ने बालिकालाई ….. – PathivaraOnline
Home > अपराध > वडाध्यक्षको कुकर्म ! आफै अध्यक्ष रहेको विद्यालयमा पढ्ने बालिकालाई …..
admin August 28, 2020 अपराध, समाचार, समाज	0
गोरखा । आफै अध्यक्ष रहेको विद्यालयमा पढ्ने बालिकालाई अनैतिक काम गरेको अभियोगमा वडाध्यक्षलाई कारवाही भएको छ । बालिकालाई अनैतिक काम गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका एक वडाअध्यक्ष बिहीबारलाई कारागार चलान गरिएको छ। गाउँकी बालिकालाई अनैतिक काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पालुङटार नगरपालिका–४ का अध्यक्ष ठाकुरकान्त रानाभाटलाई कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला अदालत गोरखाको आदेशले पुर्पक्षका लागि थु’नामा राख्ने आदेश दिएपछि उनी कारागार चलान भएका हुन् । आफैँ अध्यक्ष रहेको अमरज्योति माविको कक्षा नौ मा पढ्ने बालिकालाई अनैतिक काम गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले साउन १६ गते पक्राउ गरेको थियो।
रानाभाट तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन्। उनलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको समाजवादी पार्टीको गाउँ कमिटिले जनाएको छ।
*** भिडियो हेर्न तलको लिन्कमा क्लिक गर्नुहोस ***
भदौ महिना भित्र नेपालमा रेल आउदै (हेर्नुहोस पूरा विवरण)
मोरङ आत्मह’त्या प्रकरणकाे खुल्यो रहस्य! यस कारण प्रितिले गरेकि रहेछिन आत्मह’त्या! हेर्नुस्
अबदेखि दशैंसम्मका लागि आयो यस्तो कडा नियम